Midowga Yurub Oo Baaq Ka Soo Saaray Xaaladaha Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Yurub Oo Baaq Ka Soo Saaray Xaaladaha Soomaaliya
Frankfurt (Keydmedia) - Ururka Midowga Yurub ayaa markii u horeysay ka hadlay dagaaladii dhowaan ka dhacay degaanka Kalshaale ee degmada Buuhoodle ee Gobolka Togdheer, kaasoo u dhaxeeyey dadka degaanka iyo Maleeshiyaadka maamulka Somaliland.
War qoraal ah oo kasoo baxay Ururka Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in Ururka uu si qoto dheer ula socdo dagaaladaas isla markaana tilmaamay in uu dhaawacayo amaanka iyo xasiloonida ka jirta Maamuladaasi Puntland iyo Somaliland.
Ururka Midowga Yurub ayaa ugu baaqay labada dhinac ee dagaalku dhexmaray in ay isxakameeyaan si loo xaliyo arimaha la isku haysto iyadoo lagu sheegay warsaxaafadeedka in Midowga Yurub ka qayb qaadanaayo horumarka labada dhinac.
Waa markii u horeysay Ururka Midowga Yurub uu ka hadlo dagaaladii dhowaan ka dhacay degaanka Kalshaale ee degmada Buuhoodle.
Dhinaca kale Madaxa arimaha dibadda ee Midowga Yurub Catherine Ashton ayaa cambaareysay qaraxii ismidaaminta ee dhowaan ka dhacay Muqdisho ee lagula beegsaday Fariiisin Ciidan oo ku dhow Dugisga sare ee Boliiska ee Magaalada Muqdisho qaraxaasi oo ay ku geeriyoodeen 15 ruux oo isugu jira Ciidan & dad rayid ah oo wada Isticmaalayay.